4 Siyaabaha Si aad u hesho iPhone Number Serial
Waxaan ku noolnahay adduun cusub oo horumarsan, la teknoolajiyada oo dhan nagu wareegsan. Item kasta oo alaabta, haddii ay tahay ciyaaryahanka DVD ama telefoonka ah, waxaa la soo saaray iyadoo tiro taxan. Tani waxay ka ilaalinaysaa alaabta ka xatooyo. Haddii aad tahay qofka ugu faani iPhone ah, ka dibna waxaa muhiim ah in aad ogtahay meesha lambarka taxanaha gaar ah. Ma awoodi doonaan in ay helaan macluumaad muhiim ah oo aad telefoonka, sida faahfaahinta badbaadinta damaanad, iyada oo aan macluumaadkan muhiimka ah in aad. Hoos waxaa ku qoran, waxaan kala hadli doonaa 4 siyaabood oo aad u heshaan kartaa lambarka taxanaha iPhone.
Xalka 1. Raadi iPhone Number Serial via Lugood
Mid ka mid ah barnaamij muhiim ah in si xoogan looga faa'iideysan waxaa la iPhone waa Lugood. Haddii aad ka warqabin software this gaar ah, waa barnaamij ku kooban gudahood aad telefoon kuu ogolaanaya inaad si ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda iyo music. Marka aad isticmaalaysid Lugood, software ah caasimadii lambarka taxanaha ah si loo hubiyo in qalabka ku habboon ayaa weli la isticmaalo.
Isticmaal tallaabooyinka soo socda si aad u hesho tirada isticmaalaya Lugood taxan:
Codsiga Lugood ee on your computer Launch.
Connect aad iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo xadhig USB ah.
Ka dib markii software ayaa bilaabay on your computer, guji "Qalabka" icon, ee ku taalla bar menu.
Dooro "Summary" Tirada aad iPhone ee qaybta iPhone ee la soo daabici doonaa.
Xalka 2. Raadi Serial iPhone aad iPhone si toos ah
Waxaa jira habab dheeraad ah oo ay joogaan lambarka taxanaha iPhone haddii habka Lugood ma mid lagu guulaystay. Mid ka mid ah hab gaar ah waa iyadoo la isticmaalayo aad iPhone dhabta ah. On screen guriga ka mid ah qalab aad ka, guji "Settings" doorasho. Dhibic A hoos liiska menu arbushin doonaa. Riix erayga "Guud" ka dibna riix "About". Your nambarada taxan waa in hadda la qoran shaashadda.
Xalka 3. Raadi iPhone Serial rasiidka
Haddii aad mar dambe ma ay haysan qalab aad sabab u ah waa in la xado, ama haddii aad weli dhibaato helo tirada taxanaha ah iyadoo la isticmaalayo tallaabooyinka kor ku xusan, ka dibna waxaa jira labo xal kale. Marka aad soo iibsatay aad iPhone, in aad qaadato rasiid, ama caddaynta iibsashada. Dukaamada intooda badan waxay leeyihiin qaab la helo isku mid ah, si loo helo tirada waa in fudud. On rasiidka, raadi line in uu leeyahay sharaxaad ka mid ah wax ka iibsatay. Sida caadiga ah qiimaha waa on line la mid ah la helo. Ama on line la mid ah ama si toos ah u hoos ku qoran, waa in aad aragto "Number Serial" ama "Ser. No." oo leh tirooyinka si toos ah ka dib.
Xalka 4. Hel Serial iPhone in Email
Ka dib markii uu iibsigu iPhone ah, haddii aad cinwaanka emailkaaga tagay si ay shaqaalaha Apple Tafaariiqda Store, markaas hubaal waa in aad hesho email ay ku qoran lambarka taxanaha iPhone waxa ku jira.
Marka degsado Chine gaar ah ama barnaamijyada amaanka la xiriira ee aad taleefan, aad arki karto weedha "UDID" ee ku xusan. Waxaa sii dheer, version ah qaabab kale oo lambarka taxanaha ah ee asalka ah. Waxaad heli kartaa UDID ka saxafadeed naftaada in ay soo degsado app waxtar leh loo yaqaan "ad hoc Gargaare". Ka dib markii aad ka soo dejisan iyo furi app, codsigaaga mail hoose furi doonaa in ku jira lambarka taxan. Waxaad markaas email tani u diri kartaa naftaada si dambe tixraaca.
Sida loo qari Photos on iPhone
Isbarbardhiga Galaxy qod6 Edge iyo iPhone 6
Sida loo celi Network Settings On iPhone iyo Talooyin & Tricks
Sidee si ay u gudbiyaan SMS, Music, Video, Photos iyo Xiriirada ka Symbian si iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPhone MMS
> Resource > iPhone > 4 Siyaabaha Si aad u hesho iPhone Number Serial